Iimfuno ze-visa yaseMzantsi Sudan- ALinks
Iimfuno ze-visa yaseMzantsi Sudan
January 10, 2022 UMaitri Jha South Sudan, ivisa
South Sudan lelona lizwe litsha kwihlabathi. Ukusukela oko yafumana inkululeko kwiRiphabhlikhi yaseSudan kwi2011 kuphela. Ikomkhulu lelizwe iJuba. Nangona kunjalo, ayililo ilizwe elidumileyo kwezokhenketho. Mhlawumbi ngenxa yesiphithiphithi esidlulileyo kunye nemeko yezoqoqosho. Kodwa, okwangoku, zininzi izinto ezilungileyo eMzantsi Soudan onokuthi uzihlole. Enye yezona zinto zinomdla kweli lizwe ziiDinka Tribal wrestlers. Ke, ungakonwabela ukubukela le midlalo yengingqi. Ungandwendwela noNimule, owaziwa ngokuba yiparadesi esemhlabeni. Kuzo zonke izinto, ufuna i-visa eSouth Sudan. Kule nqaku, siza kuthetha ngendlela umntu anokufaka ngayo iimfuno zeVisa kunye neVisa.
Kubalulekile ukuba ngaphambi kokuba uye eSouth Sudan. Kuya kufuneka ujonge ukuba loluphi na uxwebhu lokuhamba. Udinga lonke uhambo lokundwendwela ngeenjongo ezahlukeneyo ke, iimfuno zingahluka. Apha, ifayile ye- iwebhusayithi esemthethweni yozakuzo waseSudan inikiwe.
Ngokomgaqo-nkqubo we-visa waseSudan, ngabemi baseTanzania kuphela abangafuni ukuba batyelelwe. Ke, ukuba uvela eTanzania, ungaya eSouth Sudan ngaphandle kweVisa !!
Ngaba ndifuna i-visa yokuya eMzantsi Sudan?
Abandwendweli eSouth Sudan kufuneka bafumane i-visa komnye wozakuzaku baseSudan. Ukuba ngaphandle kokuba bayinzala yaseSudan yaseMzantsi. Okanye bavela kwelinye lamazwe anemvume yokundwendwela. Okanye bavela kwelinye lamazwe abemi bawo banelungelo lokufumana i-visa xa befika.
Ikhadi loMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO). Ikhadi kufuneka ligonywe nge-yellow fever / cholera. Masithi sifika sivela kwi-yellow fever okanye kwindawo enesifo secholera.
Ngaphambi kokuba ubhabhe, fumana iVisa yakho. Uhlaziyo lwamva lwevisa, ndwendwela Ummeli weRiphabhlikhi yaseSudan iwebhusayithi. Umntu lowo kufuneka enze imibuzo kwiNdlu yoZakuzo yaseSudan ekufutshane.
Urhulumente waseSudan ufuna abantu base-US ukubonisa ipasipoti esebenzayo okungenani iinyanga ezintandathu. Kunye nevisa yokungena okanye imvume yokungena xa ufika nakweliphi na izibuko lokungena laseSudan. Kwisithuba seentsuku ezintathu ufikile okanye umngcipheko wokuhlawuliswa. Okanye uyamiswa ukuhamba kwakho. Kuya kufuneka ubhalise kwiSebe labaphambukeli kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezangaphakathi. Kuvulwe ukususela ngeCawa ukuya ngoLwesine.
Ngaphambi kokufika eSudan, abahambi base-US kufuneka bafumane i-visa yokungena kwi-Embassy yaseSudan. Ngaphandle kwezinto ezimbini kule mfuneko zikhona:
Abahlali base-US benephepha lesazisi laseSudan. Njengepasipoti evela eSudan okanye ikhadi lesazisi.
Okanye abahambi ngenkampani okanye umbutho onabaxhasi. Masithi imvume yokungena kubo ifunyenwe kwangaphambili kwiSebe laseSudan. Kwisikhululo senqwelomoya saseKhartoum, banokufaka isicelo sokungena kwelo.
Ukhenketho lwangaphambili kwaSirayeli:
Awuyi kuvunyelwa ukuba ungene eSudan ukuba incwadana yakho yokundwendwela ine-visa yase-Israeli okanye izitampu zokungena / zokuphuma zakwa-Israeli.
Ngaphambi kokushiya ilizwe, unokufuna ukufumana i-visa yokuphuma. Ukusuka kwiSebe laBaphambukeli kwaye uhlawule nayiphi na irhafu yokuhamba kwisikhululo seenqwelomoya. Ayifakwanga kwindiza yakho. Unokufumana isitampu sokuphuma kwisikhululo seenqwelomoya ukuba ungena eSudan kwivisa yabakhenkethi kwaye ungandisi ukuhlala kwakho.
Abasetyhini kunye neentsana, kubandakanya nabantu baseSudan-baseMelika bobuzwe obubini. Kuya kufuneka babe nemvume yooyise okanye abayeni babo ukuba bemke eSudan.
Abafazi abangatshatanga nabaqhawule umtshato kufuneka babe nemvume yabazali. Abafazi abatshatileyo, nokuba bangakanani ubudala, kufuneka babe nemvume yabayeni babo.
Ijaji yaseMelika iwonga amabhinqa ngelungelo lokugcina abantwana. Inkundla yaseSudan kufuneka ikhunjulwe umyalelo wokugcinwa kwayo. Ngaphambi kokuba abantwana babo bashiye iSudan ngaphandle kwemvume yooyise. Ngolwazi oluthe kratya, qhagamshelana ne Ummeli weRiphabhlikhi yaseSudan.
Izithintelo ezinxulumene ne-HIV / AIDS:
Kubakhenkethi nakubemi bamanye amazwe baseSudan, ezinye izithintelo zokungena kwi-HIV / AIDS zikhona. Ukufumana i-visa yokusebenza okanye yokuhlala, iSudan ifuna uvavanyo lwe-HIV olubi.
Iimfuno zeVisa eSouth Sudan
Ukuze ugcwalise ifom uvule ikhonkco Ifom yesicelo seVisa.
Ipasipoti yakho kufuneka isebenze kangangeentsuku ezili-180 okanye nangaphezulu ukusuka kumhla wokufika eSouth Sudan.
Gcwalisa ifom yesicelo. Kwakhona, kufuneka isayinwe ngumenzi-sicelo kuphela. Qaphela ukuba uthabathe ushicilelo lweZicelo zakho ukuba uzenze kumacala omabini ephepha, ayiyi kwamkela. Yiyo loo nto iVisa yakho ingazokucutshungulwa de kufakwe enye.
Iifoto ezimbini (2) ezinobungakanani bepaspoti. Ubukhulu: ii-intshi ezimbini nge-2 intshi).
Kwimeko apho inkampani yakho ikumemileyo, thwala ileta esemthethweni evela kwinkampani yakho. Kwakhona, kufuneka ube neleta yesimemo. Ileta kufuneka ibe nedilesi kwi-Ofisi yoZakuzo yaseSudan evela kumbutho wakho. Kwileta, injongo yohambo lwakho kufuneka ibhale.
Ukuba zonke ziyahlangabezana nazo zonke iimfuno, iVisa inokuthatha ukuya kuthi ga kwiintsuku ezintlanu zokukhupha.
Umzi wommeli-lizwe unamandla okubonelela ngee-visa zokungena kwelinye ipasipoti rhoqo. Ii-visa zokungena ezininzi zinikwa kuphela iiPasipoti ezisemthethweni nezaseburhulumenteni.
Nasiphi na isicelo sokongezwa kokuhlala eSouth Sudan. Nxibelelana noMphathiswa Wezangaphakathi weSouth Sudan, ICandelo loBuzwe. Ngaphambi kokuphela kweVISA yakho.
Iindidi zesicelo seVisa:
Amazwe avela eSouth Sudan:
Ukubhabha eSouth Sudan, abemi abaphethe iipasipoti zaseSudan zaseSudan akufuneki bafumane i-visa. Abemi baseMzantsi Sudan abasebenzisa iipasipoti zaseMelika ukubhabha. Amaxwebhu okuhamba e-US kufuneka abe neVisa, kwaye zonke iinkqubo ezifunekayo kufuneka zifezekiswe.
Abemi baseMelika kunye nabaphathi beMelika kwiiKhadi eziGreen:
Masithi bahamba ngeepasipoti zaseMelika eziya eSouth Sudan. Kwaye amaxwebhu okuhamba e-US kufuneka alandele zonke iimfuno zevisa, kwaye umrhumo wevisa we-USD 160.00 uya kuhlawulwa.
Uhamba neepasipoti zaseYurophu eziya eSouth Sudan. Kuya kufuneka uthobele yonke imiqathango ye-visa, kwaye umrhumo wevisa we-USD 100.00 uya kuhlawulwa.
Bonke abanye abaphethe iipaspoti:
Imirhumo yeVisa iya kuhlawulwa ngokusekwe kumgaqo wokuphindaphinda ongafakwanga kula macandelo. Kuthetha ukuba uMzi woZakuzo wase Mzantsi uza kubeka imali elinganayo nelibiza ilizwe.
Ummeli weRiphabhlikhi yaseSudanIVisa yaseSudan yaseSudanIimfuno zeVisa eSouth Sudan
Amazwe asimahla eVisa eSweden!
Ungayifumana njani iVisa yabakhenkethi eMalaysia?
Ziziphi iimfuno ze-visa yase-Ireland? Iimfuno ze-visa zaseIreland
IMalaysia iVisa yamaIndiya
Oktobha 12, 2020
Ungayifumana njani iVisa yaseRashiya evela eCanada?
Ufumana njani umsebenzi eColombia?